Open History Project Pathein
Introduction to Open History Project
ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေပြိုင်ပွဲ အကြီးတန်း
ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေပြိုင်ပွဲ အငယ်တန်း
ရုပ်ရှင် နှင့် ဓာတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲဆုရသူများ
ပထမဆု – အမှိုက် ဒါရိုက်တာ – Yagami
ဒုတိယဆု – ငဝန်မြစ်ပေါ်က ခြေရာများ ဒါရိုက်တာ – နေဦးလွင်
တတိယဆု – အတွေးအိမ်မက်၊ အပိုင်း (၂)ဒါရိုက်တာ – ကိုဇော် (KBZ)၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ – ကိုသီဟ (ပန်းလိပ်ပြာ)
တတိယဆု – အတွေးအိမ်မက်၊ အပိုင်း (၁)ဒါရိုက်တာ – ကိုဇော် (KZB)၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ – ကိုသီဟ (ပန်းလိပ်ပြာ)
Pathein Umbrella & Thanakha Contest
ကျွန်တော်တို့က မြို့တွေမှာစပြီးတော့ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မကျင်းပခင် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ယဥ်ကျေးမှုကိုအခြေခံတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မကွေးမြို့မှာစပြီးတော့ သနပ်ခါးမေဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုစပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီး ဘားအံရောက်တဲ့အခါမှာ ဘားအံမှာကျတော့ သူတို့ရဲ့လက်ယက်ထည်တွေ၊ စက်ယက်ထည်တွေ၊ ချည်မျှင်နဲ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတွေ အင်မတန်မှထွန်းကားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ အင်မတန်မှ အရောင်အသွေးစုံလင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘားအံမှာရောက်တဲ့အခါမှာ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာဖြစ်တဲ့ အဆင်အကွက်တွေကို မော်ဒန်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြတဲ့ ဖက်ရှင်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ စပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့က ယဥ်‌ကျေးမှုကိုအခြေခံတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျွန်တော်တို့ ထားဝယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ထားဝယ်ရိုးရာမေပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထားဝယ်ရိုးရာမေပွဲတော်ကတော့ မကွေးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခါမှာ သနပ်ခါးမေဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထားဝယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတာက ထားဝယ်က သနပ်ခါးကိုပဲလိမ်းတာမဟုတ်ဘဲ သနပ်ခါးနဲ့ အလားတူတဲ့ သစ်သားတွေကိုလည်း သွေးပြီးတော့လိမ်းတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ တောင်နံကြီး၊ သစ်နို့တို့လိမ်းတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲ့မှာကျတော့ သနပ်ခါးဆိုတဲ့ခေါင်းစဥ်နဲ့ ဘောင်သပ်လို့မရတဲ့အတွက် ထားဝယ်ရိုးရာမေဆိုပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသီး၊ အပွင့်၊ အခေါက် အဲ့ဒါတွေနဲ့လိမ်းခြယ်ပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင် ထားဝယ်ရဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီဝတ်ဆင်ထားတာကိုမှ သနပ်ခါးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သစ်နို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တောင်နံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်လိမ်းခြယ်ပြီးတော့မှ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှ စည်ကားသိုက်မြိုက်တဲ့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုသိမ်ကိုစဥ်းစားတဲ့အခါမှာ ပုသိမ်က မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး‌ရော၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးရောသိတာက ပုသိမ်မှာပုသိမ်ထီးထုတ်လုပ်တာက အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ ပုသိမ်ထီးဟာ တကယ်တမ်းဆိုရင် ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထီးလိုအပ်ချက်၊ မိုးတွင်းရော၊ နေပူတဲ့အချိန်ရော ထီးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းပေးတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပုသိမ်ထီးရဲ့ကျော်ကြားမှုက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ ရှင်တွဲပြီးတော့ ကျော်ကြားတဲ့ ကျော်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ပုသိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်နဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်း Covid 19 အခြေအနေကြောင့် တကယ့်ကိုစည်စည်ကားကားနဲ့ လူအများကြားမှာ ကျင်းပရမယ့်ပွဲဖြစ်ပေမယ့် အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ ပုသိမ်မြို့ကနေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးငယ်အများစု ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ကြပြီးတော့မှ ဒါကိုကျွန်‌တော်တို့က ရွေးချယ်ပြီးတော့ ဆုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဓလေ့နှစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ ပုသိမ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပုသိမ်ထီးဆိုပြီးတော့ အင်မတန်မှ ကျော်ကြားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဓလေ့တစ်ခုလည်းရှိသလို သနပ်ခါးကိုလည်း မက်မက်စက်စက်လိမ်းကြတဲ့ မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။
မသော်တာလင်း(အကြီးတန်း)၊ Ma Thawdar Lin, Thanakha Festival ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မထက်ယမုံဦး (အငယ်တန်း) Ma Htet Yamon Oo, Thanakha Festival ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မယဥ်မင်းအေး (အကြီးတန်း)၊ Ma Yin Min Aye, Thanakha Festival ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မအိမ့်သွန်းပြည့်မေ (အငယ်တန်း)၊ Ma Eaint Thoon Pyae May,ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မမျိုးသီရိအောင် (အကြီးတန်း) ၊ Ma Myo Thiri Aung, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မဇူးဇူးဆန်း (အကြီးတန်း)၊ Ma Zu Zu San, Thanakha Festival ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မစနိုးမေ (အကြီးတန်း)၊ Ma Snow May, Thanakha Festival ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မစုမြတ်ဝင်း (အကြီးတန်း)၊ Ma Su Myat Win, Thanakha Festival ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မသွန်းဖြူဖြူထွန်း (အငယ်တန်း)၊ Ma Thon Phyu Phyu Tun, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မဖွေးမြမြဇော် (အကြီးတန်း)၊ Ma Phway Mya Mya Zaw, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မနှင်းဖူးဖူးအိမ့် (အကြီးတန်း)၊ Ma Hnin Phue Phue Eaint, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မကေကေယွန်းစိုး (အကြီးတန်း)၊ Ma Kay Kay Yoon Soe, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မနှင်းဆုရည်လှိုင် (အကြီးတန်း)၊ Ma Hnin Su Yi Hlaing, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မအိမ့်ချစ်မေ (အငယ်တန်း)၊Ma Eaint Chit May,Thanakha Festivalပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မကျော့ကျော့ဇူး (အငယ်တန်း)၊ Ma Kyawt Kyawt Zu, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မကေဇင်လှိုင် (အကြီးတန်း)၊ Ma Kay Zin Hlaing, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မမြတ်သင်းသူ (အကြီးတန်း)၊ Ma Myat Thin Thu, Thanakha Festivalပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မဖူးပြည့်ကြည်ဇင်ခန့် (အကြီးတန်း)၊ Ma Phue Pyae Kyi Zin Khant, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေပြိုင်ပွဲ
မခင်ခင်မြတ်ဇင် (အငယ်တန်း)၊ Ma Khin Khin Myat Zin, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မထက်ထက်ဝင်း (အကြီးတန်း)၊ Ma Htet Htet Win, Thanakha Festivalပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
မအေးသန္တာအောင် (အကြီးတန်း)၊ Ma Aye Thandar Aung, ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲ
Old Photos and Open History Project
ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကျင်းပဖို့ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ကတည်းကစပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ဟာ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေကိုစုဆောင်းပြီး မြို့တစ်မြို့ရဲ့သမိုင်းကို ခင်းကျင်းပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုသိမ်မြို့ခံတွေရဲ့ မိသားစုတွေမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ခွင့်တောင်း၊ ကူးယူပြီး လူထုကြားမှာရှိတဲ့သမိုင်းကို ထင်ဟပ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာ ပုသိမ်မြို့ခံတွေဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုညီမြင့်၊ ကိုဇော်မင်းထွတ်တို့က ဦးဆောင်ပြီး တစ်အိမ်တက်ဆင်းစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ထဲက သင့်တော်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရွေးချယ်ပြီး ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေကြောင့် အထင်ကရနေရာကြီးတွေမှာ ခင်းကျင်းမပြသနိုင်ဘဲ အွန်လိုင်းပွဲပဲကျင်းပရပါတယ်။ ဒီပြပွဲမှာ ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေပွဲတော်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲ၊ ကဗျာမြို့တော် ကဗျာရွတ်ဖတ်ပွဲ၊ အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများနဲ့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းရှင်းလင်းပြသပွဲတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြသမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဗွီဒီယိုအခုတစ်ရာကျော် ရိုက်ကူးပြသခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဗဟုသုတမြတ်နိုးသူများနဲ့ လူမှုသမိုင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေ အားပေးကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Open History Exhibition လှည်းသားငါးရာသင်္ကြန်သံချပ်အဖွဲ့၊ ပုသိမ်ဓာတ်ပုံဟောင်းများ၊ Thankyan Thangyat
Open History Exhibition; အားကစားပွဲများနှင့် အဆောက်အဦးမှတ်တမ်း၊ sports and buildings
Open History Exhibition; ဓာတ်ပုံများကပြောသောသမိုင်းမျာ
Open History Exhibition; ပုသိမ်မြို့မှတ်တမ်းမှတ်ရာဓာတ်ပုံဟောင်းများ၊ Pathein’s Old Photos
Open History Exhibition; ဆရာကြီးဦးသုခနှင့်သူ၏တပည့်များ၊ U Thukha
Open History Exhibition; နိဂြောဓာ ဘုရားပွဲမှတ်တမ်း၊ Nigawjar Pagoda Festival
Open History Exhibition; ဓာတ်ပုံများ၏နောက်ကွယ်မှ သမိုင်းများ၊ Histories behind the old photos
Open History Exhibition; မောင်‌ရွှေရိုးအက၊ Pyithuchainkwin Thakyangyat
Open History Exhibition; ပြည်သူ့ချိန်ခွင် သင်္ကြန်သံချပ်အဖွဲ့ (၈)၊ Pyithuchainkwin Thakyangyat
Open History Exhibition; အားကစားပွဲများ၊ ပုသိမ်မြို့၊ Sports, Pathein
Open History Exhibition; ၁၉၆၀-၇၀က ပုသိမ်မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများ၊ 1960-70 Pathein Magazine Advertising
Open History Exhibition; ၁၉၆၀-၇၀ ပုသိမ်မဂ္ဂဇင်းကာတွန်းများ၊ 1960-1970 Pathein Magazine Cartoons
Open History Exhibition; ပွဲတော်များမှ ဖျော်ဖြေရေးများ၊Traditional Entertainment from Festival
Open History Exhibition; ရန်ကုန်-ပုသိမ်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဗလရာဇာသင်္ဘောကြီး၊ Balayarzar Ship
Open History Exhibition; ပုသိမ်ရဲ့သင်္ကေတ ပုသိမ်ထီး၊ Pathein’s sign-Pathein Umbrella
Open History Exhibition; ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့် မြို့တော်ဝန်၊ Collage Students and Mayor
Open History Exhibition; ပုသိမ်ဒေသကောလိပ်ခေတ်နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲ
Open History Exhibition; ပုသိမ်ဒေသကောလိပ်ခေတ်က ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းခဲ့သော ကျောင်းသားများ
Open History Exhibition; ပုသိမ်ကောလိပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနေ့၊ Union Day in Pathein Collage
Open History Exhibition; ပုသိမ်ဒေကောလိပ်ခေတ်က ကိုယ့်ဝမ်းကိုကျောင်းခဲ့ရသော ကျောင်းသားများ
Open History Exhibition; ပုသိမ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံသင်ခဲ့ရသောခေတ်များ
Open History Exhibition; ပုသိမ်ဒေသကောလိပ်နှင့် ထူးအိမ်သင်၊ Pathein Collage & Htoo Eain Thin
Open History Exhibition; ပုသိမ်ဒေသကောလိပ်အကြောင်း၊ About Regional Collage, Pathein
Open History Exhibition; ပြည်ထောင်စုအလံသယ်ဆောင်ခြင်း၊ National Flag
Open History Exhibition; ပုသိမ်မြို့မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများ၊ Pathein Magazine Advertising
Open History Exhibition; နိုင်ငံတော်ဆရာ အတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်း၊ ပုသိမ်မြို့
Open History Exhibition; ပုသိမ်မြို့မှ အားကစားသမားများ၊ Sportmanships from Pathein
Open History Exhibition; ပုသိမ်မြို့၊ တောင်သူလယ်သမားနေ့
Open History Exhibition; ပုသိမ်ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ပုသိမ်မြို့ဓာတ်ပုံဟောင်းများ
Open History Exhibition; ရှင်ပြုနားသအလှူပွဲနှင့် ပုသိမ်မြို့ဓာတ်ပုံဟောင်းများ
Open History Exhibition; ၁၉၉၈ပုသိမ်မြို့ရေကြီးစဥ်၊ ၁၉၉၉ပုသိမ်သင်္ကြန်ပွဲ
Open History Exhibition;သတင်းထောက်ဦးကိုကိုနှင့်ရွှေပြည်သာစျေး၊ အထက(၂)၊ ပုသိမ်မြို့ဓာတ်ပုံဟောင်းများ
Open History Exhibition;တစ်ချိန်ကရွှေတံဆိပ်ဆုရဧရာဝတီတိုင်းဘတ်စကတ်ဘောသမားများ၊ Sportmanships, Pathein
Open History Exhibition; ဘတ်စကတ်ဘောအားကစားတွင်ကျော်ကြားခဲ့သော ဧရာဝတီတိုင်းသားများ (၁)
Open History Exhibition; ဘတ်စကတ်ဘောအားကစားတွင်ကျော်ကြားခဲ့သော ဧရာဝတီတိုင်းသားများ (၂)
Open History Exhibition; ဘော်လီဘောဘောအားကစားတွင်ကျော်ကြားခဲ့သော ဧရာဝတီတိုင်းသားများ
Open History Exhibition; ဓာတ်ပုံဟောင်းများ၏နောက်ကွယ်မှ သမိုင်းများ၊ ပုသိမ်မြို့
Open History Exhibition; ကျောင်းအားကစားပွဲများနှင့် ပုသိမ်သင်္ကြန်
Open History Exhibition; ပုသိမ်မြို့အထင်ကရနေရာများနှင့်အမှတ်တရပုံများ
Open History Exhibitionပုသိမ်မြို့မှ ဆရာ၊ ဆရာမကြီးများ၊ ပုသိမ်ဓာတ်ပုံဟောင်းများ၊ Teachers of Pathein
Poetry Recital, Pathein City
ကဗျာမြို့တော်၊ ကဗျာရွတ်ဖတ်ပွဲ ပုသိမ်မြို့
ပုသိမ်မြို့က အစကတည်းက ကဗျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျော်ကြားတဲ့ ကဗျာဆရာတွေအများအပြားထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုသိမ်မြို့ကို ကဗျာမြို့တော်လို့ တင်စားပြောဆိုရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ရဲ့ ကဗျာမြို့တော်အစီအစဥ်မှာ ပုသိမ်မြို့က ကဗျာရွတ်ဆိုတင်ဆက်မှုကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ မြို့တစ်မြို့မှာရှိနေတဲ့ အနုပညာနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူတွေ၊ အနုပညာချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက အသိအမှတ်ပြုလာအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ စီစဥ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာကပေးတဲ့ ခံစားချက်တွေကို မျှဝေနိုင်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင်မီးတောက်ကလေး၊ကဗျာဆရာ-ဝီရထက်နောင်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
နတ်ဖွက်ထားတဲ့ပီဇာ၊ ကဗျာဆရာ-MK၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
မြစ်ဆိပ်၊ ကဗျာဆရာ-မောင်အောင်ပွင့်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ငါနိုးတော့ ငါ့မျက်ဝန်းတစ်ခုလုံးရေပြင် ကဗျာဆရာ-လူဖန်ခါး၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ပုသိမ်သားများမဖတ်ရ၊ ကဗျာဆရာ-အောင်ဝေး၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
သက်တံ့မြစ်၊ ကဗျာဆရာ-ထူးအိမ်သင်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
လူထုအမှတ်သညာအိမ်ပုသိမ်၊ ကဗျာဆရာ-ညီမြင့်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ငါ့ကမ္ဘာငယ်၊ ကဗျာဆရာ-ငြိမ်းသီဟ၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
မီးမီးကစ ကာကွယ်ဘား၊ ကဗျာဆရာ-လူအိမ်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ချိန်းကြိုး၊ ကဗျာဆရာ-စိုင်းပန်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ပျော်စရာနိုင်ငံတော်၊ ကဗျာဆရာ-စိုင်းပန်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
တပြမော်ဒန် ကဗျာဆရာ-ညီမြင့်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ငဝန်ကြယ်စင်နှစ်ခက်ယက်ခရီး၊ ကဗျာဆရာ-‌မောင်မျိုးထက် (ပုသိမ်)၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
နှစ် (၆၀) ဝိဘစ္ဆ၊ ကဗျာဆရာ-မောင်မျိုးထက် (ပုသိမ်)၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
စားကျက်၊ ကဗျာဆရာ-ဦးဦးဆန်း (ငွေဆောင်)၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
နိုးထခြင်းအိမ်မက်၊ ကဗျာဆရာ-ဦးဦးဆန်း (ငွေဆောင်)၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
မွေးဖွားခြင်း၊ ကဗျာဆရာ-ဦးဦးဆန်း (ငွေဆောင်)၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
လမ်းစပြတ်ရှင်သန်ရင်းနဲ့၊ ကဗျာဆရာ-MK၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာသစ်ဆီ၊ ကဗျာဆရာ-မင်းထက်မောင်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
အဖျားနဲ့လူ၊ ကဗျာဆရာ-သျှပ်မှူးကျော်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
စံပယ်ဖြူအိမ်မက်၊ ကဗျာဆရာ-လင်းထက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
အဆက်တိုင်းဟာအ‌ရေးကြီးတယ်၊ ကဗျာဆရာ-ငုအိမ်ထက်မြက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ပုသိမ်ကိုပြန်လာမယ်၊ ကဗျာဆရာ-ခင်မင်းဇော်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
ကိုငှက်၊ ကဗျာဆရာ-MK၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Famous People of Pathein
ရှေးခေတ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပုသိမ်မြို့ဟာ အဖက်ဖက်က ထူးချွန်ထင်ရှားသူတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျော်အမော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အထ္တုပ္ပတ္တိကိုပြုစုသူကိုဇော်မင်းထွတ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြားထားပါတယ်။ အတုယူစရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေရဲ့အကြောင်းကို လေ့လာရင်း ဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ရဲ့ အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်မေမေခင်၊ Daw May May Khin, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဖိုးပါကြီး၊ Phoe Par Gyi, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
အဘိဓာန်ဆရာကြီး ဦးဟုတ်စိန်၊ U Hote Sein, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ရွှေဘ၊ Shwe Ba, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ကာတွန်းဆန်းထွန်း၊ Cartoon San Tun, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ထူးအိမ်သင်၊ Htoo Eain Thin, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားမျာ
ကထိက ဦးသက်တင်၊ U Thet Tin, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဦးဗိုလ်ကေ၊ U Bo Kay Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
သံအမတ်ကြီးဦးမြစိန်၊ U Mya Sein, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
သူရတင်ဦး၊ U Tin Oo Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ကလယ်ရီဗယ်အိုင်ရင်းပိုး၊ Mrs. Ba Maung Chain, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
စောဘဦးကြီး၊ Saw Ba Oo Gyi, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ရာဇဝင်ဆရာကြီးဦးဘသန်း၊ U Ba Than, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
မြန်မာ့အလင်းဦးစိန်း၊ U Sein, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဒေါက်တာစံစီပိုး၊ Dr. San Si Poe, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
သမ္မတကြီးဒေါက်တာဘဦး၊ Dr. Ba Oo, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ကာတွန်း-ရွှေတလေး(ဦးဘကလေး)၊ U Ba Ka Lay, အပိုင်း ၁ Famous People of Pathein,အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ကာတွန်း-ရွှေတလေး(ဦးဘကလေး)၊ U Ba Ka Lay, အပိုင်း ၂ Famous People of Pathein,အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ကာတွန်းဆရာကြီးဦးအောင်ရှိန်၊ Cartoon U Aung Shein, Famous People of Pathein,အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဆရာကြီး ဦးထွန်းရှိန်၊ U Tun Shein, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ပုသိမ်ဒေါ်တင်တင်၊ Pathein Daw Tin Tin, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
စာရေးဆရာကြီးဦးမြတ်ထန်၊ U Myat Htan, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဦးထွန်းဝင်း၊ U Tun Win, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ပုသိမ်မောင်စိမ်းသူ၊ Pathein Maung Sein Thu, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
စာရေးဆရာမောင်ရန်ပိုင်၊ Mg Yan Paing, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဆရာကြီးကျော်ဇေယျာ၊ Sayargyi Kyaw Zayar, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဆရာမကြီးမလေးလုံ၊ Ma Lay Lone, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
ဆရာမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊ Daw Myint Myint Khin, Famous People of Pathein, အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများ
Our Festivals For – Pathein City
သမိုင်းကို ထင်ဟပ်စေသောလူမှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
PHOTOS ON ACTIVITIES
ဓာတ်ပုံများစုဆောင်းမှု နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ
လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် ပုသိမ်မြို့မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
At the end of 2019, we had successfully organized five Open History Festivals through Photography, Documentaries, Generations talks on History, Arts and other social activities.
-the first in Kyauktada (Yangon)
-the second in Magway
-the third in Hpa-an and
-the fourth in Dawei
-the fifth in Yangon University
-In 2020, We are preparing for Pathein and Meikhtila.
ပြိုင်ပွဲဝင် ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ နှင့် ဓာတ်ပုံများ
တတိယဆု – အတွေးအိမ်မက်၊ အပိုင်း (၂)ဒါရိုက်တာ – ကိုဇော် (KZB)၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ – ကိုသီဟ (ပန်းလိပ်ပြာ)
Mingalar Bar Pathein မင်္ဂလာပါပုသိမ်၊ ဒါရိုက်တာ-သားချို၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Sunset on Tetseik တက်ဆိပ်ချောင်း၏နေဝန်ချိန်၊ ဒါရိုက်တာ-ကျော်ဇင်ထွဋ်၊ ပုသိမ်မြို့၊လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Waves of emotions လှိုင်းခတ်လေလှိုင်းရင်လှိုင်းခတ်သံ၊ ဒါရိုက်တာ-ပုသိမ်မင်းထိုက်
Memory from Heart ရင်ထဲကအမှတ်သညာ၊ ဒါရိုက်တာ-သသ (ဝန်းရံရှင်)၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတာ်
Farmers လယ်သမား (ပထမပိုင်း)၊ ဒါရိုက်တာ-တင်ဝင်းနိုင်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Farmersလယ်သမား (ဒုတိယပိုင်း)၊ ဒါရိုက်တာ-တင်ဝင်းနိုင်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Good Merit ဖြူစင်စိတ်ထားကုသိုလ်ပွား၊ ဒါရိုက်တာ-မြတ်ညိမ်း၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Aung Hmue Thet 1
Aung Hmue Thet 2
Aung Hmue Thet 3
Daw Aye Aye Win 1
Daw Aye Aye Win 2
Daw Aye Aye Win 3
Htein Lin 1
Htein Lin 2
Htein Lin 3
Htet Aung San 1
Htet Aung San 2
Htet Aung San 3
Ko Hlaing Moe 1
Ko Hlaing Moe 2
Ko Hlaing Moe 3
Ko Win Soe 1
Ko Win Soe 2
Ko Win Soe 3
Min Chit Thu 1
Min Chit Thu 2
Min Chit Thu 3
Saw Pyi Soe 1
Saw Pyi Soe 2
Saw Pyi Soe 3
Thein Soe Min 1
Thein Soe Min 2
Thein Soe Min 3
Thura Naing 1
Thura Naing 2
Thura Naing 3
Tin Win Naing 1
Tin Win Naing 2
Tin Win Naing 3
U Aung 1
U Aung 2
U Aung 3
U Thiha 1
U Thiha 2
U Thiha 3